iphone 13 yakateedzana bhatiri kugona uye bhatiri kubuda
Kuru Nhau & Ongororo iPhone 13 yakateedzana bhatiri kugona uye bhatiri kubuda
Gore rino & apos; s Apple iPhone 13 dzakateedzana inogona kusaratidza hombe dhizaini yekuvandudza asi pane & apos; kuchine zvakawanda zvekunakidzwa nazvo. Iyo iPhone 13 Pro uye Pro Max mamodheru ane runyerekupe kumitambo yakatsetseka 120Hz OLED kuratidza, ese maPhones anofanirwa kurongedza akakura ekuchengetedza masimba, uye chii chakanyatso tarisa pano - kunatsiridza hupenyu hwebhatiri hupenyu nekuda kwemabhatiri makuru.
Iwe unogona zvakare kuwana inobatsira:
iPhone 13 tsananguro
iPhone 13 Pro zvirevo
iPhone 13 Pro Max tsanangudzo
iPhone 13 mini tsananguro
Ko iyo iPhone 13 ichave iri nani hupenyu hwebhatiri?
Ehe, iyo iPhone 13 ichave nebhatiri hombe sekuenderana nemuongorori Ming-Chi Kuo. Kuo akambotaura izvozvo Apple yakawana nzira yekukwana mabhatiri akakura mukati meiyo iPhone 13 nekushandisa anochinjika emabhodhi ematunhu mukati mefoni uye nekudaro achigadzira imwe nzvimbo yekuwedzera iyo bhatiri kugona.
Isu & apos; takanzwawo mishumo yekuti ese maApple 13 mamodheru anogona kunge ari kuwedzera mukobvu ne 0.26mm , pamwe zvakare kugara bhatiri rakakura. Izvo uye iyo nyowani yeA15 Bionic chip & apos; zvingangoita simba rakawandisa dhizaini inoratidza kuti iwo iPhone 13 mamodheru anofanirwa kuve nehupenyu huri nani hwebhatiri kupfuura gore rapfuura & maPhones.
Iyo iPhone 13 ichave yakawanda sei bhatiri?
Isu & apos; takanzwa akati wandei iPhone 13 bhatiri makuhwa achikurudzira kuti mAh (milliampere-awa) yemafoni ichawedzerwa. Chazvino uno leaker L0vetodream yatiunzira Weibo posvo - inofungidzirwa kubva kune inozivikanwa leaker Dhijitari chiteshi chiteshi - icho chakaburitsa iro bhatiri kugona kweayo anotevera maPhones.
Kubva pane iko kudonha, isu tinotarisira kuti iyo iPhone 13 bhatiri kugona mu mAh anotevera:
iPhone 13 minibhatiri chinzvimbo
iPhone 13bhatiri chinzvimbo 3,095 mAh
iPhone 13 Probhatiri chinzvimbo 3,095 mAh
iPhone 13 Pro Maxbhatiri chinzvimbo 4,352 naRaama
Izvi zvinoreva here kuti hatidi & apos; hatinetseke nezve iPhone 13 bhatiri rinopera?
IPhone kuchaja kuburikidza neMagSafe Kusvika parizvino, iyo yese info yatinayo pane iri kuuya iPhone 13 mamodheru inoratidza kuti ivo & apos; vachanatsiridza hupenyu hwebhatiri. Kunyangwe kana kwete aya mafoni achave nechero bhatiri rekudonha nyaya ichiri kuyedzwa.
Gara wakatarisana neFoniArena.com yeedu iPhone 13 akateedzana maoko-pane ongororo. Kana nhare dzikaburitswa, isu & maapuro; tichaedza mabhatiri eese iPhone 13 mamodheru zvakakwana uye taura pane chero zvingangoitika bhatiri rekudonha nyaya.
5g sim kadhi t nhare
Tenga $ 50 kana yakakwira Google Play kadhi rechipo kubva kuAmazon uye chengetedza $ 5
Beacon ndiyo Uber & apos; mhinduro kuLyft & apos; s Amp